Ngathi-iShaoxing Sich Cosmetics Packaging Co., Ltd.
I-SHAOXING SICH COSMETICS PACKING LIMITED [Yuyao Langrun Plastic Factory] ngumenzi wobuchwephesha wokupakisha iimveliso e-China, ezibekwe kwisixeko saseYuyao. Inkampani yethu igubungela malunga ne-1,000 yeemitha zesikwere. Sinefektri yobuchwephesha ukuvelisa iingqayi zeenzipho kunye nezikhongozeli zezithambiso ezinamava apheleleyo.we sinamakhulu abathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.singabonelela ngoyilo lwelogo kunye nefektri yenkonzo yomsetyenzana iseZhejiang, sikwanayo neofisi eGuangzhou.
Ngaphezulu kweminyaka eli-10 yobuchule bokwenza kunye nokudibanisa, siye saphumelela ekunikezeleni abathengi bethu ngezisombululo zokupakisha ezifanelekileyo eziqinisekisa ukhuseleko kunye nokuphakamisa isikhundla sophawu kwintengiso.
Sinokuyilwa kwendlu kunye nokwenza iqela, umatshini wokuhombisa umbala ngokuzenzekelayo, ukuprinta kwesilika kunye nomatshini oshushu wokufaka iileyibhile kunye neemodeli ezahlukeneyo zenaliti kunye noomatshini ababethayo. Zonke ziya kuba negalelo kwiimveliso ezikumgangatho ophezulu kwaye zihambise ngokukhawuleza kubathengi bethu.
Sinikezela ngezixhobo eziphambili zesiko kwiimveliso ukuzisa iikhonsepthi ezintsha kwintengiso. Iqela lethu langaphakathi leenjineli kunye nabayili bayakukunceda ngombono wakho, umsebenzi, umsebenzi wobugcisa kunye noyilo. Injongo yethu kukukunceda ukubonelela ngemveliso esebenzayo, enomdla kunye nenqwenelekayo kubaxhasi bakho. Ukuba ufuna ukuba upakisho lwakho lwenziwe ngokuchanekileyo, yiya neNkampani yokuPakisha ye-SICH.
Ihowuliseyili cream Cream Jar, Ibhotile emnyama yeGel Polish, Iziqulatho zeCream cosmetic, Ijayi yeKhrimu yeLiso, Isithambisi sePowder sePowder kunye neSifter, Cream Jars Izithambiso Packaging,